ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဥရောပခရီးစဉ်အတွင်း ထူးခြားဖြစ်ရပ်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဥရောပခရီးစဉ်အတွင်း ထူးခြားဖြစ်ရပ်များ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဥရောပခရီးစဉ်အတွင်း ထူးခြားဖြစ်ရပ်များ
Posted by အညာတမာ on Jul 2, 2012 in Myanma News, News | 17 comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဥရောပခရီးစဉ်အတွင်း ထူးခြားဖြစ်ရပ်များဆိုတာကတော့ တခြားအရာတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ခရီးစဉ်ကို ရေးသားဖော်ပြကျတဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာများ၊ Facebook များ၊ ဖော်ဝပ်မေးလ်များ၊ ပြည်တွင်းသတင်းဂျာနယ်များ တွင် ကျတော်ဖတ်ခဲ့သမျှတွေထဲမှ ထူးခြားမူ (ထူးခြားမူဟုထင်သောကိုယ်ပိုင်အယူအဆ) ဟု ဆိုနိုင်မည့်ဖြစ်စဉ်များ ကို ပြန်လည်ကောက်နူတ် တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျတော် ကောက်နူတ်တင်ပြသောအရာများထက် လေးနက်သော၊ အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသောအရာများ ဤခရီးစဉ်တွင် မရေ တွက်နိုင်အောင် များပြားနေမယ်ဆိုတာ ကျတော်အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ပြီးသားပါ။
၁။ ၂၄ နှစ် အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဥရောပ ခရီးစဉ်ဟာ ဒုတိယအကြိမ် နိုင်ငံခြားခရီးစဉ် ဖြစ်ခြင်း။ ပထမတစ်ကြိမ်နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံပါ။ ဇွန်လဆန်းက ကျင်းပခဲ့တဲ့ အရှေ့အာရှဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ်ညီလာခံတက်ရောက်ခြင်းပါ။
၂။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၁၃ ရက် နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁ဝ တွင်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီး၊ ၁၃ ရက် ဇွန်လ ၂၀၁၂ တွင် ဥရောပ ခရီးစဉ်ကို စတင်ခဲ့ပါသည်။
၃။ ဇွန်လ ၁၄ ရက်၊ နံနက် ၁ဝ နာရီတွင် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဂျီနီဗာမြို့တွင် ကမ္ဘာ့အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ် ၁၀၁ ကြိမ်မြောက် ညီလာခံ၌ မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၄။ ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး နှင့် ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရခြင်း၊ တစ်နေကုန် ပင်ပန်းမူနှင့် ဆက်တိုက်လေယာဉ်ခရီးစဉ်များကြောင့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအစ မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပင် မူးဝေလာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
၅။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ သမ္မတ ဖိတ်ကြားထားသော နိုင်ငံတော် ညစာစားပွဲကို နေမကောင်း ဖြစ်တာကြောင့် ဖျက်သိမ်းလိုက်ရ။
၆။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်လ်ဆုကို ကိုယ်တိုင်တက်ရောက် မယူနိုင်ခဲ့သော စတုတ္ထမြောက် ဆုရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်း။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နော်ဝေနိုင်ငံ၊ အော်စလိုမြို့ရှိ နိုဘယ်လ်ဆုချီးမြှင့်ရေးကော်မတီက ၁၉၉၁ ခု၊ အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်လ်ဆုကို မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်ဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းဆုကြည်အား ချီးမြှင့်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းနှစ်အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်လ်ဆုု ချီးမြှင့်ပွဲကို ဒီဇင်ဘာလ ၁ဝ ရက်နေ့က အော်စလိုမြို့တွင် ကျင်းပရာ ထိုစဉ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရသည့်အတွက် ကိုယ်တိုင်သွားရောက် လက်ခံရယူနိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့် သားကြီးမောင်မြင့်ဆန်းအောင်က မိခင်ကိုယ်စား ဆုတက်ရောက်ယူခဲ့ရသည်။ Carl von Ossietzky (ကားလ်ဖွန်အော်စီအက်စ်ကီ), Andrel Sakharov (အန်ဒရေဆာခါရောဗ်) နှင့် Lech Walesa (လက်ဘိုဝင်စာ) တို့မှာလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်လ်ဆုကို ကိုယ်တိုင်တက်ရောက် မယူနိုင်ခဲ့သော ဆုရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။
၇။ နိုဘယ်လ်ဆုချီးမြှင့် ပေးအပ်သည့်သမိုင်းတွင် တကြိမ်မျှ မရှိခဲ့ဖူးသော ဆုရရှိသူအား ဆုပေးအပ်ရန် ဒုတိယအကြိမ် ဆုုချီးမြှင့်ပွဲ အခမ်းအနား ပြန်လည် ကျင်းပသည်မှာ ယခုတကြိမ်သာရှိသေးသလို၊ နိုဘယ်လ်ဆုချီးမြှင့် ပေးအပ်သည့် အခမ်းအနားကို ဒီဇင်ဘာလ တွင်သာ ကျင်းပလေ့ရှိသော်လည်း အထူးအစီအစဉ်တစ်ရပ်အနေဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား ဂုဏ်ပြုသည့်အနေနှင့် သီးသန့်ကျင်းပပေးခြင်းလည်းဖြစ်ပါသည်။
၈။ အိုင်းရစ်အဆိုတော်ဘိုနို က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ ဒပ်ဗလင်မြို့သို့ သွားရောက်ရန် အတွက် သူ၏ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယာဉ်ကို ပေးအပ်ခဲ့သည်။
၉။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ Oxford တက္ကသိုလ်တွင် ပြောကြားသော မိန် ့ခွန်း ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လက်ခုတ်သံ အကြာဆုံး မိန် ့ခွန်းဖြစ်၏။
၁၀။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို လေးစားသမှုပြုတဲ့ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာ သူ၏နေအိမ်မှာ နေ့လည်စာ တည်ခင်းဧည့်ခံပြီး နှင်းဆီပန်းခြံကို လမ်းလျှောက်ထွက်လာတဲ့အခါ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင် ထီးဆောင်းပေး။
၁၁။ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ဆောင်းပေးတဲ့ ထီး ဟာ အရွက်တဖက် ပြုတ်နေ။ (ထီး အရွက်တဖက်ပြုတ်နေတာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သတိထားမိလို့ ရယ်မောနေဟန် ရှိတဲ့ ပုံဟာ…ပကာသနမပါ…ဟန်ဆောင်မှုမပါ…အင်မတန် သဘာဝကျပြီး အေးချမ်းလှတဲ့ မြင်ကွင်းလေးပါ – ကျတော်တော့ သဘောကျလို့ ခဏခဏ ပြန်ပြီးကြည့်မိတယ်။)
၁၂။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ Clarence House ဥယျာဉ် အတွင်းတွင် အမှတ်တရ အဖြစ် မြန်မာအခေါ် တတိုင်းမွှေးပင် (Magnolia tree) ကို ချားလ်မင်းသားနှင့် ကြင်ယာတော် ကင်မလာ တို့နှင့်အတူ စိုက်ပျိုးခဲ့။
၁၃။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အရေးကြီးပုံကို လတ်တလော ဗြိတိန်နိုင်ငံ ခရီးစဉ်မှာ ထုတ်ဖော်ပြောဆို ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ဗြိတိန်စီးပွားရေး သတင်းစာတစ်စောင်က အခုလိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။<blockquote> ဗြိတိန်နိုင်ငံ UKIT စီးပွားရေး သံတမန်အုပ်စုရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ Lord Marland နဲ့အဖွဲ့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ကုန်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းကိစ္စတွေ ဆွေးနွေး ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံကို ဇူလိူင်လအတွင်း လာရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ UKIT အုပ်စုနဲ့အတူ အခြားဗြိတိသျှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်း ပါဝင်လိုက်ပါလာကြမယ်ဖြစ်တယ်။ အခု လာရောက်ကြမယ့် အုပ်စုဟာ ဥရောပသမဂ္ဂက မြန်မာအပေါ် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ အရေး ယူမှုတွေ ပြန်လည် ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီး နောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံကို ပထမဆုံးလာမယ့် ဗြိတိသျှ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်အုပ်စု ဖြစ်ပါတယ်။</blockqoute>
၁၄။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နှစ်ပေါင်း ၃၀ဝ ကျော်သက်တမ်းရှိ ဗြိတိသျှပါလီမန် Wesrminster ခန်းမမှာ ဗြိတိန်လွှတ်တော်နှစ်ရပ်လုံးကို ဒုတိယကမ္ဘာစစ် နောက်ပိုင်း နိုင်ငံရပ်ခြားမှ ငါးဦးမြောက် ဂုဏ်ထူးဆောင် ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့က မိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ (ယခင်ပြောကြားခဲ့သော လေးဦးမှာ ပြင်သစ်သမ္မတ ချားစ်ဒီဂေါလ်၊ တောင်အာဖရိက သမ္မတ နယ်လ်ဆင်မင်ဒဲလား၊ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဘင်နီဒစ် (၁၆) နှင့် အမေရိကန် သမ္မတ ဘာရက်အိုဘားမားတို့ ဖြစ်ပါတယ်။)
၁၅။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အဲလ်လီဇဘက် ဘုရင်မကြီး (Queen Elizabeth) ပြီးလျှင် ဗြိတိန်ပါလီမန်နှစ်ရပ်ပေါင်းတွင် ထူးထူးခြားခြား မိန့်ခွန်းပြောခွင့်ရသူ ဒုတိယမြောက် အမျိုးသမီးလည်းဖြစ်သည်။
၁၆။ ပို၍ထူးခြားသည်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဗြိတိန်ပါလီမန်နှစ်ရပ်ပေါင်းတွင် မိန့်ခွန်းပြောခွင့်ရသော အာရှတိုက်မှ ပထမဆုံး အမျိုးသမီးဖြစ်သည်။
၁၇။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏ ပါတီကြီးတစ်ခုဖြစ်သော လေဘာပါတီဌာန ချုပ် ရုံးခန်းဖွင့်ပွဲကို လန်ဒန်မြို့မှ ပဲရစ်မြို့မထွက်ခွာခင် တက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
၁၈။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဥရောပခရီးစဉ်အတွင်း ရန်ကုန်မြို့ အမှတ် ၅၄၊ တက္ကသိုလ်ရိပ် သာလမ်းရှိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်အား အမွေဆိုင် ကိစ္စမှာနှစ်ဦး (ဦးအောင်ဆန်းဦး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်) စလုံး သားသမီးဖြစ်နေတာကြောင့် အမွေတွေကို အညီအမျှ တဝက်စီ ခွဲဝေယူဖို့ ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးကနေ အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။
၁၉။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ပြင်သစ် နိုင်ငံမှ နိုင်ငံတော် အထူး ဧည့်သည် အဖြစ်ကြို ဆိုမည်ဖြစ်သလို ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သော နိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ် ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုမှာဖြစ်တယ်လို့ ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်း ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
၂၀။ ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Laurent Fabius နှင့်အတူ အမှတ်တယသစ်ပင်စိုက်ပျိုးခဲ့။
၂၁။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် သူမ၏ခရီးစဉ်အတွင်း သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်ဟာ ရိုးသားဖြောင့်မတ် တည်ကြည်သူဟု သူယုံကြည်တဲ့ အကြောင်းကို ၂ ကြိမ်တိုင်တိုင် ပြောကြားသွားပါတယ်။ အင်္ဂလန်ပါလီမန်တွင်ပြောသောမိန့်ခွန်းနှင့် ပြင်သစ် သမ္မတ Francois Hollande နှင့်ပြုလုပ်သော ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတို့တွင်ဖြစ်သည်။
၂၂။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ခရီးစဉ်အတွင်း ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ် နှင့် ပြင်သစ် သမ္မတ တို့က သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်အား သူတို့နိုင်ငံများအား လာရောက်လည်ပတ်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့။
၂၃။ ဗြိတိန် နိုင်ငံအပါ အဝင် ဥရောပနိုင်ငံများဖြစ်သော ဆွစ်ဇာလန်၊ နော်ဝေ၊ အိုင်ယာလန်၊ နှင့် ပြင်သစ်နိုင်ငံများသို့ သို့ ၁ရ ရက်ကြာ သွားရောက်ခဲ့သော ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ၏ ဥရောပ ခရီးသည် သူမအား ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး အဖြစ် မှတ်ကျောက်တင် အသိ အမှတ်ပြု ခြင်း ခံရသည့် အောင်မြင်သောခရီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
၂၄။ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဇွန်လ ၃ဝ ရက်နေ့ နံနက် ၁ဝ နာရီ ၃ဝ မိနစ်ခန့်တွင် ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်း TG 303 ဖြင့် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ ချောမွေ့စွာပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ လာရောက်ကြိုဆိုသော ပြည်သူများအပြင် လေဆိပ်အတွင်းရှိသူများပါ လက်ခုပ်တီး၍ သောင်းသောင်းဖျဖျ ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
၂၅။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဥရောပ ခရီးစဉ်ကို ပြည်တွင်းသတင်းဂျာနယ်များ တွင် မျက်နှာဖုံးသတင်းအဖြစ် ဝေဝေဆာဆာ ဖော်ပြနေပေမဲ့ မြန်မာအစိုးရပိုင် သတင်းစာများကတော့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စာလှယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ဥရောပ ခရီးစဉ်ကို သတင်းတိုလေးအနေနဲ့တောင် ဖော်ပြခြင်းမရှိတာကို အံ့ဩသင့်စွာ တွေ့ရပါတယ်။ <blockquote>ဒါဟာလည်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ကျော်ဆန်းရဲ့ ရှေးရိုးစွဲဝါဒတစ်ခုဖြစ်မည်ထင်ပါသည်။ ကိုယ်ခန္ဓာသန်စွမ်းပြီး စိတ်ဓာတ်မသန်စွမ်းသူတွေရဲ့ မနာလိုတဲ့ လုပ်ရပ်ပါ။</blockqoute>
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်၊ ဒီချုပ်ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဥရောပ ၅ နိုင်ငံ ခရီးသည် အထက်ပါအချက် ၂၅ ချက်ထက် လေးနက်သော၊ အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသော၊ အရာများ မြောက်များစွာရှိနေပါသေးတယ်ဆိုတာ အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ရင်း ကျတော်တို့နိုင်ငံ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးပြီး ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲ၍ အနှစ်သာရပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်သစ်တည်ထောင်ဖို့ စိတ်ကောင်းထား၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတူတူ၊ ကျရာတာဝန်ကနေ၊ မခိုမကတ် အလုပ်လုပ်ကျပါစို့။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာ၍ စိတ်ရော၊ ကိုယ်ပါ ချမ်းသာပါစေ။
အစ်ကို့ရဲ့ အချိန်ယူပီး ပြန်လည်ဝေမျှပေးထားတာကို လေးစားစွာနဲ့ ဖတ်ရှုမှတ်သား သွားပါတယ်။
လွှတ်တော်အမတ်ထက် လူထုခေါင်းဆောင် တစ်ဦးရဲ့ အံ့ချီးမကုန်နိူင်တဲ့ အကြောင်းအရာ အချက်အလက်တွေပါဘဲ
ပတ္တမြားမှန်ရင် နွံမနစ်ဘူးဆိုတဲ့ စကား ကျနော့်အတွက် သက်ရှိထင်ရှား ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ် စကားအဖြစ် မှတ်ယူထားပါကြောင်း..
ဒေါ်စုခရီးစဉ်ရဲ့ ထူးခြားချက်တွေ သတင်းနေရာအသီးသီးမှာ
ဖတ်ခဲ့ရပေမဲ့..ဒီလိုတစုတစည်းထဲ ဖတ်ရတော့ ပိုအရသာရှိပါတယ်ဗျာ..
အချိန်ယူပီး တကူးတကပြုစု တင်ပြရင်းဂုဏ်ပြုထားတာကို
ရချောင်းမြောက် လက်မ က ကျုပ်ဟာပါဗျို့ …
စကားမစပ်ဗျာ … ထမိန် ဝတ်တဲ့ လူဂျီးဒွေ ကလေးအထှာကျချက်ကတော့…
ဘယ့်နှယ့် ဟိုမင်းသမီး လင် အကြိမ်ကြိမ်ယူတာ ကျ ပြပီး..
ကမာ္ဘတန်း နာမည်ကျော်တဲ့ ခရီးစဉ်ကိုတော့ …..
ပါဆယ်နယ် ခရီးစဉ်ဆိုပီး မထုတ်လွှင့် မဖော်ပြဘူးတဲ့ ….
မပြလည်းနေပေါ့နော … ပြဿနာ မရှိ …အဲ …ပြဿနာ မရှိ ပြဿနာရှာချက်ကတော့
နိုင်းလောက် ရှိသေးရဲ့ … ။
ဟိုလိုမခေါ်ရဝူး သည်လို ခေါ် ထ လုပ်လိုက်သေးတာများ ..
အူးဖွတ်ကျား တို့များ …ရှေ့နောက်မညီတာများပြောပါတယ်…
ဂုဏ်ယူစရာ ကောင်းတဲ့ ဒီလိုသတင်းက နိုင်ငံကိုဂုဏ်တက်စေပါတယ်။
၉ ချောင်းမြောက်လက်မက ကျုပ်လက်မဗျို့။
တစ်စုတစ်စည်းထဲ မှတ်တမ်းတင်ထားသင့်တာကို စုစည်းပေးထားတဲ့အတွက်
ကိုယ်ခန္ဓာသန်စွမ်းပြီး စိတ်ဓာတ်မသန်စွမ်းသူတွေရဲ့ မနာလိုတဲ့ လုပ်ရပ်ပါ။ ဆိုတဲ့ စာသားလေး အရမ်းကို ခိုက်သွားပြီ … ။
အမေစုရဲ့ အောင်မြင်မှုကို …. နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မထည့်သွင်းပေမယ့်လည်း … မြန်မာပြည်သူတွေသာမက တကမာ္ဘလုံးကပါ အသိမှတ်ပြုကြပါတယ် … ။ စိတ်ဓါတ်သေးသိမ်သူတို့ရဲ့ … လုပ်ရပ်သာ ပိုမိုပေါ်လွင်လာမှာပါ .. အမေစုကတော့ အလုံးရင်းဘာမှ လျော့မသွားပါဘူး … ။
တစ်စုတစည်းတည်းဖတ်ရအောင ်တင်ပေးတဲ့ ပို့စ်ပိုင်ရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။
တရုတ်ပြည်က ရဲစည်၊ ကိုကြီးမိုက်၊ ဂီဂီ၊ the best၊ ဦး (ဟာ…ဟုတ်ပါဘူး) ကိုဘလက်၊ ကိုပေ နဲ့ etone တို့ကို ဝင်ရောက် ဖတ်ရှူတဲ့အတွက် ကျေးဇူတင်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ တွဲလျှက်တင်ချင်ပေမယ့်၊ မတင်တတ်တာကြောင့် စာတွေနဲ့ပဲ တင်ခဲ့ရတယ်။
အချက်အလက်အားလုံးကို တစုတစည်းတည်း သိခွင့်၊ ဖတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါနော်။
ဦးအောင်ဆန်းဦးနဲ့အမွေကိစ္စမှာ
တစ်ဝက်စီခွဲဝေယူစေဆိုတဲ့ အမိန် ့ကို မကျေနပ်လို့အယူခံဝင်ထားတယ်ကြားမိတယ်
နိုင်ငံခြားသား အမွေပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိ ဘူးလို ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင်ပါတဲ့..
ကောင်းတယ်ဗျာ အခုလို အမေစုရဲ့ခရီးစဉ်က ထူးခြားချက်လေးတွေကိုဖော်ပြပေးတာ
ကျတော်တို့လဲ ခရီးစဉ်ကိုကြည့်တာဘဲ အခုလိုမျိုးထူးခြားချက်လေးတွေ မတွေ့ဘူးဗျ
ကျေးဇူးပါဗျာ ကိုအညတမာရေ.. အခုလို စုစုစည်းစည်း တင်ပေးလို. ထိထိရောက်ရောက် ဖတ်လိုက်ရပါတယ်..
အမေစုက ကျွန်တော်တို.ရဲ. ထာဝရ အမေပါပဲဗျာ……..
အသေးစိတ်သိလိုက်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တကယ့်ကို စုံစုံလင်လင်ပါပဲ… အမွေကိစ္စမှာ ထပ်ပြီးအမိန့်ချ လိုက်တာက “ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တစ်သက်နေထိုင်သရွေ့ ဒီအိမ်ကိုရောင်းချကာမှ တစ်ဝက်ပေးရမည်” ဟုကြားသိရပြီး တစ်ဝက်စီပိုင်ဆိုင်စေဆိုတဲ့အမိန့်ချပြီး နောက်တနေ့ထပ်မံအမိန့်ချတာဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်လားဆိုတာကို …. အတည်ပြုပေးကြပါဦးနော်…
ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီခရီးစဉ်အတွင်းမှာ အမေစုကို လေးစားတာကတော့
ဘယ်နိုင်ငံကိုဘဲသွားသွား မြန်မာ အဝတ်အစားဝတ်ထားတာကိုဘဲ။
ဒီက ဘာမသိ၊ ညာမသိ လူကြီးတွေကတော့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ လောက်ဘဲ သွားတာကိုဘဲ။
ဟွင်း… ပြောကို မပြောချင်တော့ပါဘူူး။
(ဒေါ်မြလေး လေသံဖြင့် ဖတ်ရန်)
မိုက်တယ်ဗျာ..မှတ်သားစရာတွေချည်းပဲ..။ ကူးလည်းကူးထားမိတယ်။ ရှဲရှဲနိ
အနော်ကတော့ လက်မနဲ့တင်မလုံလောက်လို့ မထောင်တော့ဘူး (လက်မထောင်တာထက်ပိုပြီးကြိုက်တယ် ဆိုတာပြတဲ့ သင်္ကေတတစ်ခုထားရင်ကောင်းမယ်) အူးကျော်ဆန်းက သတင်းမထုတ်ပြန်ဘူးလား သနားပါ တယ် သူက အရပ်အရမ်းပုတော့ အူတိုတယ်လေ အဟွတ်…. ချောင်းကလည်းဆိုးလိုက်တာ ဒေါက်တာ ချက်ကြီးဆီပြေးလိုက်ဦးမယ် ………….